Mpanonta kaody 7 malaza ho an'ny Linux | Ubunlog
Mpanonta kaody 7 malaza ho an'ny Linux
Webmaster, developer, programmer ve ianao sa manokana fotoana hianarana zava-baovao, ato amin'ity fizarana ity dia manana ho anao ny sasany amin'ireo mpampanonta kaody malaza indrindra amin'ny Linux aho.
Iray amin'ireo tsy fantatra lehibe indrindra niseho tamin'ny nanombohako ny fifindra-monina avy tany Windows ka hatramin'ny Linux dia ny fahafantarana izay fomba hafa tokony hataoko mba hanatanterahana ireo fomba fanaoko amin'ny programa.
Eto no betsaka amin'ireo vao manomboka na olona tsy sahy manao ny fanovana satria matahotra sao tsy mandeha ny mpanitsy kaody ho an'ny Linux.
Eto ary no misy azy ireo diso satria ao amin'ny Linux dia manana fitaovana maro ho an'ny fandaharana isikaNa ny maro amin'izy ireo aza dia sehatra hafa.
Ny mpampanonta kaody dia tena manandanja tokoa rehefa manamboatra rindranasa Izy io dia afaka manamora ny asanao amin'ny alàlan'ny fanomezana endri-javatra ilaina an-taonina ho an'ny mpamorona izay manome fampiasa toa, plugins mba hananana fampiasa fanampiny, famenoana autocomplete izay mameno ny marika, kilasy ary na dia ireo sombin-kaody aza tsy mila soratana.
Araka ny voalaza Betsaka ny tonian-dahatsoratra ary eto ihany no nanangonana ny sasany amin'ireo be mpampiasa indrindra.
1 Lahatsoratra anio
5 azon'ny gedit
6 fononteny mahitsy
Lahatsoratra anio dia iray amin'ireo tonian-dahatsoratra manankarena indrindra ampiasain'ny programmer matihanina. Ankoatry ny fananana ireo fiasa fototra rehetra, ny Sublime dia manana endri-javatra mahery vaika, manome fanohanana ireo fiteny amin'ny programa tsy tambo isaina, fitetezana kaody, fampisehoana, fikarohana, fanoloana, ankoatry ny maro hafa.
Na dia voaloa aza ity tonian-dahatsoratra ity, afaka mahazo kinova andrana maimaimpoana ianao hahalala an'ity tonian-dahatsoratra lehibe ity.
Ity ecode editor dia manohana fiasa mandroso marotoy ny fanamarihan'ny tag, ny autodetection mahery, ny fikarohana ary ny fanoloana, ny fanohanana ny fampidirana ireo programa ivelany toa ny make, lint, weblint, sns.
Ankoatry ny fitantanana HTML sy CSS, manana fanohanana amin'ireto fiteny manaraka ireto.
GNU Emacs dia mpamoaka kaody voarindra ao amin'ny LISP sy C, ity dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Linux, ary izany dia satria dia iray amin'ireo tetikasa novokarin'i Richard Stallman, ny mpanorina ny tetikasa GNU.
Geany mikendry ny hanome tontolo iainana fampandrosoana tsotra sy haingana. Izy io dia manana ny fiasa fototra rehetra toy ny auto-guidance, ny syntax ary ny fanasongadinana kaody na ny sombin-tsarimihetsika feno sns. Madio i Geany ary manome toerana malalaka kokoa hiasana.
azon'ny gedit no tonian-dahatsoratra izay efa napetraka mialoha amin'ny fizarana Ubuntu, ity editor ity dia mety ho tena tsotra sy kely, fa azo namboarina hifanaraka amin'ny tontolon'ny asanao amin'ny alàlan'ny fametrahana plugins sy fikirakirana ny fikirana efa misy.
azon'ny gedit azo ampiana noho ny fanampiana plugins izay azontsika jerena amin'ny Internet.
Ny fononteny dia tonian-dahatsoratra izay manohana plugins hanitatra ny fampiasa ao aminy ary mora tokoa ny fametrahana ireo plugins ireo. Mila tsindrio fotsiny ilay kisary fahatelo eo amin'ny sisiny ankavanan'ny ambony ary hisokatra ny varavarankely mampiseho ny fanampin'izy ireo malaza. Azonao atao ny manindry tsindry fotsiny mba hanampiana plugins ary afaka mitady plugins manokana ianao.
Mametraka ity editor ity, tsy maintsy mankany amin'ny tranonkala ofisialiny isika ary ao amin'ny azy fizarana fampidinana azontsika atao ny mahazo ny kinova farany, amin'ny fonosana deb na appimage
Izy io koa dia miaraka amin'ny syntax Markdown izay manohana ny topi-maso mivantana amin'ny browser.
Mametraka Atom amin'ny solosaina tsy maintsy mankany amin'ny tranonkala ofisialiny isika ary ao amin'ny fizarana fampidinana ho hitantsika ny fonosana deba.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Mpanonta kaody 7 malaza ho an'ny Linux
GP Munoz Montoya dia hoy izy:
Valiny ho an'i GP Muñoz Montoya
Tsy hita ny Visual Studio Code, tonian-dahatsoratra feno sy misy plugins marobe!
Misaotra voalohany tamin'ny fandraisana anjara rehetra nataonao.
ary faharoa, hanampy VIM aho.
Stas dia hoy izy:
Ny tonian-dahatsoratro # 1 dia Codelobster - http://www.codelobster.com
Mamaly an'i Stas
Sintomy ny Udemy Course Videos miaraka amin'i Udeler